‘भाषणले महिला दिवसको सान्दर्भिकता झल्काउन सक्दैन’ | Nepal Ghatana
प्रकाशित : २४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १२:३२
कैलालीको टीकापुर नगरपालिका– १, गणेशपुर शिविरकी कल्पना चौधरीलाई महिला दिवसको जानकारी नै छैन । यस्ता दिवस कहिले आउँछन् ? कसले मनाउँछन् ? कहिले सकिन्छन् ? उहाँलाई यस्ता दिवसले कहिल्यै छोएको पनि छैन । शिविरको बास, पाँच जनाको परिवारको गुजाराका लागि उहाँ सात वर्षदेखि ‘इलेक्ट्रिक मेकानिक’को काम गर्दै आउनुभएको छ । श्रीमान्बाट काम सिक्नुभएकी उहाँलाई यस्ता दिवसमा जाने फुर्सद पनि छैन । श्रीमान् र कल्पनासँगै काम गर्नुहुन्छ ।
कल्पना, सीता र रामकुमारी यसका सानो उदाहरण मात्र हुन् । वास्तविक उत्पीडनमा परेका नारीलाई महिला दिवसले छुन नसकेका थुप्रै उदाहरण छन् । सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले आज १११औँ अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा थुप्रै कार्यक्रम आयोजना गरिएका छन् । केही सामाजिक अगुवा भने कार्यक्रम गर्नु नराम्रो नभएको भए पनि वास्तविक उत्पीडनमा परेका नारीका पक्षमा रहेर नारी दिवस मनाउँदा त्यसको परिणाम सकारात्मक आउने पक्षमा देखिन्छन् ।